Norway: Booliska oo awood loo siiyay inay xiraan dadka jabiya karantiilista. - NorSom News
Norway: Booliska oo awood loo siiyay inay xiraan dadka jabiya karantiilista.
Wasiiradda cadaalada iyo amniga Norway ayaa sheegtay inay dowladu ay awood dheeri ah siisay booliska iyo laamaha kale ee amniga, si looga hortago dadka lagu sameeyay karantiilista, ee hadana banaanka usoo baxa.
Monica Mæland oo ah wasiiradda cadaalada in boolisku ay xooga saari doonaan xakameynta dhaq-dhaqaaqa dadka lagu sameeyay karantiilista, si looga hortago faafitaanka caabuqa Corona-virus.
Dadka aan u hogaansamin awaamiirta booliska, ayay wasiiradda cadaaladu sheegtay ku hanjabtay inay mudan karaan ciqaab xabsi ama ganaax lacageed.
Xigasho/kilde: Truer med bøter og fengsel.
Previous articleNorway: Hadii aad Sweden iyo Finland kasoo gasho, 14 maalin oo karantiilis ah.
Next articleNAV: Dowlada oo dadka shaqooyinka laga fariisiyay arimo badan u fududeysay.